Madaxa arrimaha debadda ee EU oo la kulantay Morsi - BBC Somali
Wararku waxay sheegeen in gellinkii danbe ee Isniintii Catherine Ashton ay muddo laba sacadood ah wadahadallo dheer la yeelatay madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray Maxamad Morsi. Ilaa hadda shaaca lagama qaadin goobta ay kula kulantay Morsi, laakiin madaxweynahaasi hore waxa uu u xidhnaa milateriga dalka Masar ilaa bishan July 3-dii. Catherine Ashton waa mas'uulkii ugu horreeyey ee ajanebi ah ee ilaa hadda la kulma madaxweynahaasi hore intii xukunka laga tuuray, waxayna maalmahani booqasho ku joogtey magaalada Qaahira.Booqashada Baroness Ashton waxay ku soo hagaagtey iyadoo halkoodii ay ka sii socdaan muddaharaadyadii iyo isku dhacyadii ka oognaa beryahan dalka Masar, gaar ahaanna magaalada Qaahira oo maalmihii ugu danbeeyey ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin ilaa 70 qof.
Militeriga oo hortaagan dad banaanbaxaya Isla maanta oo Salaaso ah, taargeerayaasha Maxamed Morsi waxay sheegeen inay qorshaynayaan debadbaxyo waaweyn. Dhinaca kalena dawladda ku-meel-gaadhka ahi waxay ka digtay ku kicitaanka wax qas iyo isku dhac ah, iyo in haddii kale ay kaga hortegi doonto gacan bir ah. Ciidamada nabadgelyadu waxa kale oo ay ku hanjabeen inay kala diri doonaan dadweynaha isku soo urursanaya agagaarka masjidka weyn ee Rabaac-al-Cadaawiya ee debadbaxa ka hor oogaya, fagaarahaasi oo ku yaal dhinaca waqooyi-bari ee magaalada Qaahira. Waana fagaarihii ay ka dhaceen maalintii Sabtidii dilkii iyo dhimashadii ugu badnayd.Ilaa iyo hadda lama sheegin faahfaahinta waxa ay ka wada hadleen mas'uulka arrimaha debadda ee EU Catherine Ashton iyo madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Morsi markii ay kulmeen, laakiin dad badan ayaa rajaynayaa in la helo farsamo looga baxo qaska iyo ismari waaga ilaa haatan ka taagan siyaasadda dalka Masar iyo deganaanshihii guud.